Banyere Anyị - Zhangjiagang City Daking Jewelery Co., Ltd.
Akwa mma pearl ngwaahịa soplaya dabere na ụlọ ọrụ dum yinye na ika. E guzobere DAKING Jewelery na 1992 na Zhangjiagang, obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị nso na shanghai, n'akụkụ Osimiri Yangzi. Kemgbe ahụ, anyị aghọọla ndị na-ebupụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị pel niile. Gụnyere n'ichepụta, ịkpụpụta na mbupụ ọla ube, ọla edo ọla edo, ọla edo edo edo na akara ọla edo dị oke ọnụ ahịa na akwa ejiji ejiji.
28 Afọ nke Ahụmahụ
DAKING jewelery a raara nye kacha mma na mma niile nke anyị pearl ọla na anyị ahịa ọrụ. Ruo afọ 28, anyị raara onwe anyị nye na mmepe na itinye n'ọrụ nke pearl nwere ọkachamara, ọrụ, ịrụ ọrụ nke ọma na usoro ọrụ ọhụụ. Na ezi okwukwe, echiche, na ezi aha nke management, Anyị na-kwara na mmepe nke Pearl Industry na sayensị, technology, ọnụ ọgụgụ na brand.In n'oge a, anyị na-eje ozi ọtụtụ ndị ahịa si gburugburu ụwa na-achọ ndị kasị mma A na-eji aka ya emepụta ọla ọ bụla.
Ọganihu anyị na-aga n'ihu site na ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ na-aga n'ihu. Kachasị mma na Ogo. Ọkachamma na ricnye ọnụahịa. Ọkachamma na Ọrụ. Anyị na-etinye oge dị ukwuu n'ịhọrọ, nyocha na imepụta ụdị ọla ọ bụla n'ihi na anyị chọrọ ka ejiri naanị ọrụ ndị ahịa kacha mma jeere gị ozi. Anyị chọrọ ka ị jee ije na pearl ọla ịchọ mma ọhụụ ị nwere ntụkwasị obi ma nwee ọ happyụ.
Aaa Mmiri Ahia, Freshwater Pearl Bridesmaid Onyinye, Ọla Ntị Agbamakwụkwọ, White Gray Freshwater Ọla Pel, Pearl Stud ọla ntị, Ezigbo Omenala Cultured Freshwater Pearl,